Atôma - Wikipedia
Ny atôma (avy amin'ny fiteny grika taloha ατομος [atomos], « tsy azo zaraina ») dia singan-javatra kely indrindra mety mivondrona amina foto-javatra hafa mba hanome izay atao hoe môlekiola. Ny teôria atomista, dia manohana ny hevitra hoe ny zavatra dia vita "voany" tsy afaka zarazaraina (mifanohitra amin'ny hevitra zavatra azo sarasarahina hatrany), dia fantatra hatry ny Taona Taloha, ary i Demôkrita, filôzôfy grika tamin'izany andro izany, no nonanohana ny teôria atômista. Ny teôria notohanan'i Demôkrita dia niadian-kevitra hatramin'ny faran'ny taonjato faha 19, ary ankehitriny ny hevitr'i Demôkrita dia tsy adin-kevitra intsony. Ny foto-kevitry ny siansan-javatra ankehitriny dia mifototra amin'io hevitra io. Tsy heverina fa voan-javatra tsy azo zarazaraina intsony ny atôma hatry ny fanandramana fizika niokleary namao ny rafiny tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha roapolo.
Ny atôma dia voan-javatra misy voany ; ny voany dia 99,9%-n'ny lanja tontaliny, ary manodidona azy dia misy atao hoe elektrôna mihodikodina manodidon'ny voany. Mivelatra in-40 000 nohon'ny voany ny rahon'elektrôna. Ao amin'ny voany dia misy prôtôna mitondra voanaratra miabo sy neotirôna tsy mitondra voanaratra ary ny elektrôna manodidona azy dia mitondra voanarana miiba. Samihafa amin'ny atôma sasany ny hidirôzenina, satria ny voan'ny miratoerany 1H, mitondra anarana hoe prôtiôma dia tsy manana elektrôna.
Betsaka ny atôma afaka mamorona rohy amin'ny atôma hafa amin'ny alàlan'ny elektrônany, ny firafitra elektrônika dia mametra ny tondro simikan'ny atôma, miankina amin'ny isan'ny prôtônan'ny voany. Ny isan'ny prôtôna dia ny isa atômika ary io no anisan'ny zavatra mahasamihafa ny atôma iray amin'ny atôma hafa.
((en)) Fundamental Physical Constants – Complete Listing
((fr)) Alfred Kastler, LE CONCEPT D'ATOME DEPUIS CENT ANS [pdf]
((en)) Sketching of History of Statistical Mechanics and Thermodynamics Archived Mey 2, 2006 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Atôma&oldid=1016120"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 15:35 ity pejy ity.